Ivory Coast oo noqotay Champio+nka Afrika SAWIRO. – Cayaaraha dunida
Ivory Coast oo noqotay Champio+nka Afrika SAWIRO.
120- Daqiiqo oo la ciyaaray waxba waa la iska dhalin waayey waana la is mari waayey xulalka finalka usoo baxay ee Ghana iyo Ivory Coast labada kooxoodna waxay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay oo qiiro gaar ah xambaarsanayd.
Hadii la is mari waayey 120 Daqiiqo oo la ciyaaray waxaa la dhigay rigoorooyin si loogu kala baxo cidii noqon lahayd Champion-ka Afrika oo kama danbeystiisa ay usoo baxeen Ghana iyo Ivory Coast iyadoo mudo bil ah ay soo socdeeen ciyaaraha Qaramada Afrika.
Biloowgii rigoorooyinka waxaa laba jeer oo isku xiga qasaariyey xulka Ivory Coast iyadoo si gaar ah uu kubada birta ugu dhuftay Wilfried Kanon Bony oo Manchester City ay dhawaan uun 30 milyan kusoo qaadatay.
Iyadoo xaalka ay quus ka joogto Ivory Coast ayaa nafta waxaa kusoo celiyey laba ciyaaryahan oo Ghana ah oo laba fursadood iska qasaariyey waxayna noqotay in 11 ciyaaryahan ee garoonka ku jiray ay wada tuurtaan oo goolhayaha Ivory Coast Boubacar Barry Copa uu noqday xidigii badbaadiyey oo qabtay rigooradii u danbeysay isla markaana dhaliyey goolka guusha oo ay koobka Qaramada Afrika ku hanteen.
8 – 9 waxaa rigoorooyin ku hantay xulka Ivory Coast oo mudo badan u haraad qabay oo finalka u iimaan jiray, waxana la dhihi karay weey mudnaayeen waayo shan sanno ayay Fialka imaanayeen.
Dhanka kale xidiga Ghana hogaaminayey Andre Ayew ayaa la aamusin kari waayey ka dib markii ay hanjabaad dhex martay isaga iyo goolhayaha Ivory Coast kuwaasoo kuwada hadlay in qof waliba dhankiisa uu badin doono hase yeeshee Andre Ayew aad ayu ugu murugooday guuldarada naxdinta leh ee ku dhacday ilaa iyo biladaha aad ayuu u ooyayey waana la aamusin kari waayey. Aad baan ugu xumahay in Andre Ayew uu guul daro kula laabta dalkiisa iyo kooxdiisa Marsielle uu ka tirsan yahay.
Rigoorooyinka la tuuraa waa mid xanuun badan waxaa dhankiisa aan fiirsan oo murugo ay ku heysay xidiga Ivory Coast iyo Roma Gervinho oo daqiiqad ka hor la badalay dhamaadkii ciyaarta naceybka uu qabo darteed wuxuu qaatay kurssi wuxuuna ka jeestay garoonka ciyaarta kasocotay, aan ku xusuusiyo Gervinho wuxuu ahaa ninkii rigoore uu gamay ka qasariyey kuna reebay xulkiisa.
Yaya Toure oo wax badan lagu hor qaatay koobkan Qaramada Afrika ayaa caawa kor u taagay koobkaasi isagoo dadaal badan usoo galay wuxuuna ahaa kabtanka Ivory Coast isaga ayaana ahaa wakiiilkii koobkaan la wareegay markoodii labaad oo ay Ghana ka qaadayaan.
Maxamed Saalax oo noqday Cayaaryahanka ugu fiican Africa.
Issa Hayatou oo muddo badan kadib lagaga guuleestay tartankii madaxda Arfica ee CAF +Sawirro.
Xulka Qaranka Cameroon Oo Markii 5aad Ku Guulasytay Koobka Qaramada Qaarada Afrika +Sawirro.
Isku aadka Wareega Gruubyada isreeb reebka aduunka ee qaarada Africa oo la Soosaaray.